Noho ny PSE mantsy, nanjary firenena manana ny maha izy azy eto Afrika ankehitriny ny firenena senegale, ary anisan'ireo firenena afrikanina nisandratra ara-pandrosoana indrindra tao anatin'ny fotoana vitsy. Antony iray lehibe nifidianan'ny vahoaka senegale ny Filoha Macky Sall izany. Ny PSE dia vinan'asa mitovy amin'ny “Initiative pour l'Emergence de Madagascar” (IEM), izay politika ankapoben'ny fanjakana ankehitriny. Tsy ho ambakan’ny Senegale angamba ny Malagasy eo ambanin’ny fitarihan’ny Filoha Andry Rajoelina.
Marihina fa anisan'ireo filoham-pirenena miisa 18 maneran-tany voahasa manokana hanatrika ny lanonam-piahanihan'ny Filoha Macky Sall tao amin'ny « Centre des expositions » ao Diamniadio, Dakar ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina ny 2 aprily. Nanomboka tamin'ny 11 ora maraina, ora any an-toerana ny lanonana. Ankoatran'ireo filoham-pirenena, praiminisitra miisa 2 sy praiminisitra lefitra miisa 2 ihany koa no tonga nanatrika ny lanonana.